Fowsiyo Yuusuf: Ma dhici doonto in xildhibaan dambe lagu sasabo laaluush! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 17 January 2015
Mareeg.com: Wasiirkii hore ee arrimaha debadda Soomaaliya, Fowsiyo Yuusuf Xaaji Adan oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradsan xukuumadda Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan xildhibaanada lagu sasabi doonin laaluush.
Fowsiyo Yuusuf ayaa sheegtay iney si xoogan uga hortegi doonaan xukuumadda RW Cumar C/rashiid, aysana dhici doonin in mar dambe xildhibaan la laaluusho si uu ugu codeeyo wax dadka Soomaaliyeed dhibaato ku ah.
“Xukuumaddan waan ridi doonaa, mana dhici doonto in xildhibaanada laaluush lagu sasabo” ayay tiri Fowsiyo Yuusf Xaaji Aadan, waxaana xukuumadda ay u hanjabeysay noqotay mid maanta lagala cabsaday baarlamaanka oo dib u eegis lagu sameynayo.
Warka Fowsiyo ayaa cadeyn ah in xildhibaanada Soomaaliya qaataan Laaluush si looga fushada danaha markaas laga leeyahay. Baarlamaanka ayaa inta badan diidan iney laaluush qaataan.